မိမိတို့၇ဲ့အချိန်လေးတွေကိုအကျိုး၇ှိ၇ှိအသုံးချကြည့်၇အောင်နော်…… | နေမင်း ( နည်းပညာ )
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မိမိရဲ့လိုအပ်ချက် ၊ မိမိရဲ့ပြင်စရာလေးတွေကို ပြင်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် သဘောထားကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ဘ၀မှာ နယ်ပယ်အသီးသီးက အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေဟာ အချိန်ကိုသူများထက် တန်ဖိုးထားအသုံးချတတ်ကြလို့ သူများတွေထက် ထူးချွန်ထက်မြက်သူတွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။ သူများတွေ အိပ်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တစ်တွေဟာ လေ့လာမှတ်သားနေကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ်မယ်။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားကလည်း အချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်သည် အခုအချိန်မှာ “ဥစ္စာ” ၊ “ပညာ” ၊ “ကုသိုလ်” ဒီသုံးခုထဲက တစ်ခုခုရနေသလားလို့မေးကြည့်ပါတဲ့၊ တစ်ခုခုရနေတယ်ဆိုရင်တော့ ထိုသူသည် အချိန်ကိုကောင်းစွာအသုံးချနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ မိမိဟာ အခုအချိန်မှာ ဥစ္စာလည်းမရဘူး၊ ပညာလည်းမရဘူး၊ကုသိုလ်လည်းမရဘူး ဆိုရင်တော့ မိမိကိုယ်ကို ငါဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးနေသူတစ်ယောက်ပဲဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်ပါတဲ့။
ကျွန်တော် အခုအချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးထားတာကို စာဖတ်သူများအနေနှင့် ဖတ်ထား ၊ မှတ်ထား ၊ သိပြီးသားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ သိပြီးသားဖြစ်နေပေမယ့် မေ့တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ သိတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာလေးကို မှတ်သားဘူးပါတယ်။ ” To know and not do is not yet to know ” “သိပြီးတော့ မလုပ်လို့ရှိရင် မသိသေးလို့ပါတဲ့”။မသိသေးတာမှ မဟုတ်တာ ကျွန်တော်တိုက သိရဲနဲ့ လိုက်မလုပ်နိင်ကြသေးတာ။ လိုက်မလုပ်ကြတာ အချိန်ကို ဖြုန်းနေကြတာပါ.။ ကဲ့ ဒီနေရာလေးမှာ တရားတော့ ဟောလို့ ကောင်းသွားပီး ဆက်လက်ပီးတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ အချိန်ကို ဖဲ့ယူပုံလေး နဲ့ စာဖတ်မှတ်လေ့လာပုံလေးကို ရေးချင်ပါတယ်။ တနေ့တာ လုပ်ငန်းစဉ်တခုကိုပေါ့ ။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဘ၀နဲ့ ကိုက်ညီမူ မရရှိတာတွေ ကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ နောက်တချက်က မိမိ ကိုယ်ပိုင် Tmie Line တခုနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မူ မရှိသေးလိုပါပဲ့ ။ ဒီချိန်စာကျက်မယ် ဒီချိန် ကစားမယ် ဒီချိန် နားမယ် ဆိုပီးတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အလေ့အကျင့်မရှိခဲ့တာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ အချိန်ရဲ့ တန်ဖိုး ကို လူတွေ မသိတာ မဟုတ်ပါဘူး သိပါတယ် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး မျက်ကွယ်ပြု အပျော်ကိုပဲ့ ဦးစားပေးနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် မိမိ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်ကို မရောက်ပဲ့ ဆန့် တငန့်ငန့် ဖြစ်နေတာပါ။အကိုအစ်မများလည်း မိမိတွက် ရည်မှန်းချက်တွက် အချိန်ကို အကြိုးရှိစွာ အသုံး ချပြီးတော့ ဘ၀ကိုရှေ့ဆက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းရင်း ……. အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချတက်အောင် မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမပါ နားလည်ပါ ။ဘ၀ကို ဒီတိုင်းဆက်ပြီး မမျှော်လင့်ပဲ နဲ့ ကောင်းထက် ကောင်းအောင် .. ဆက်ဆက်ပီးကောင်းအောင် ကြိုးစားသွားကြပါလိုပြောရင်း ကျွန်တော့ရဲ့ ပိုဒ် လေးကို ဒီမှာပဲနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်နော်………
ဒီထက်မကစုံစုံလင်လင်လေးသိချင်သေး၇င်တော့ ဒီလင့် လေးမှာသွားပြီဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်…
Posted in Knowledgebase. LeaveaComment »
« Mirillis Splash PRO HD Player 1.5.0 Multilanguage